Fiainana mpilalaon’ny barea :: “Efa safidy fony kely ny ho mpilalao matihanina”, hoy i Melvin Adrien • AoRaha
Nisongadina tampoka tao amin’ny ekipam-pirenena malagasin’ny baolina kitra na ny Barea i Melvin Adrien, mpiandry tsatokazo. Anisan’ny mpilalao niavaka sy nalaza indrindra ho an’ireo mpanaraka baolina kitra nandritra ny fiadiana ny amboaran’i Afrika na ny Can tany Ejypta i Melvin Adrien, eny fa na ho an’ireo tsy dia mpankafy an’ity taranja ity aza, fa niara-nientana tamin’i Madagasikara fotsiny. Efa safidy nanomboka tamin’ny fahakeliny ny hitady vola amin’ ny alalan’ny filalaovana baolina kitra, raha ny resaka fohy nifanaovana taminy teny amin’ ny lapan’Iavoloha, afak’omaly.
Teraka tao Le Port tatsy Nosy La Réunion i Melvin Adrien. Niondrana tany Frantsa izy tamin’ny taona 2012 ka lasa mpilalao baolina kitra mpila ravinahitra any an-toerana. Ny klioba FC Martigues milalao amin’ny diviziona fahaefatra na National 2 amin’ny fifaninanam- pirenena frantsay no misy an’ity mpiandry tsatokazo, 25 taona, ity. Klioba fanindiminy nisy azy io, hatramin’ny naha matihanina azy, taorian’ny Amiens, Creteil, Royal Excel Mouscron, Mulhouse.
Efa isan’ireo mpilalao tao amin’ny Barea izy hatrany amin’ ny fanomanana ny fifaninanana fiadina ny tapakila hiakarana any amin’ny CAN tamin’ny taona 2018. Tany amin’ny fifaninanam-bondrona vao tena niseho ny fahaizany rehefa nihaona voalohany tamin’i Guinée ny Barea tamin’ny 22 jona lasa teo. Nitohy ny fanehoany fahaizany, na tamin’ny lalao nifandrinana tamin’i Burundi izay nanavotany an’i Madagasikara mba tsy ho voasahalan-dry zareo ny baolina tokana matintsika. Avy eo, nampi-tolagaga nanoloana an’i Nizéria sy nanakana tifitra maromaro tamin’ny RD Congo sy i Tonizia.
6 taona monja
Revon’ny baolina kitra tokoa i Melvin nanomboka tamin’ ny fahazazany. Vao enin-taona monja izy dia efa niditra tao anatin’ny klioba Jeanne d’Arc tatsy La Réunion. Lehibe tany amin’ity Nosy rahavavy ity izy. Tany no nianarany sy nilomanosany tanteraka tao anatin’ny taranja baolina kitra nandritra ny sivy ambin’ny folo taona.
“Efa tia fanatanjahantena hatramin’izay ny ray aman-dreniko. Tena taranja nalaza sy tian’ny fianakaviako ny baolina kitra. Mbola kely aho tamin’izany ka ny taranja malaza no nosafidiana natao. Ny ho tafavoaka amin’ ny fiainana no tanjona tamin’ izany ka ny baolina kitra no hita fa hahafahana mahatratra ny tanjona”, hoy i Melvin, raha nanazava ny nofinofiny tany am-piandohana, nandritra ny resaka nifanaovana taminy tao anatin’ilay lanonana fanomezana mariboninahitra ny Barea teny Iavoloha tamin’ ny alatsinainy lasa teo.
Mbola tsy manana vinavina ny hitranga rahampitso hatreto ity mpilalao izay manana rà Malagasy avy amin’ny ray aman-drenibeny ity. Manana fifanarahana amin’ny FC Martigues izy, klioba nitazona ny laharana fahasivy tamin’ny finaninanam-pirenena diviziona fahaefatra tamin’ny taom-pilalaovana farany teo.
Amin’izao faha-25 taonany izao dia nolazainy fa “ manana fotoana mbola hivoarana izy. Tsy haiko izay hiseho raha afaka dimy taona. Ny hivoatra hatrany amin’ny baolina kitra no tanjoko. Mbola lavitra ny lalana na dia efa betsaka aza no efa vita, raha ny teo amin’ ny sehatra iraisam-pirenena toy izao”, araka ny namaranany ny resaka fohifohy taminy.
Haiady “pancrace” Miandry ireo klioba roapolo ny fifaninanam-pirenena
Kitra – « Orange pro league » Ahemotra ireo lalaon’ ny Fosa Juniors
Fitsenana makotrokotroka :: Noraisin’ny Malagasy nanoatra noho ny tompondaka ny Barea
Kitra-fifidianana FMF :: Hivoaka amin’ny 24 jolay ny lisitra ofisialin’ireo kandida